Kuminyene utshumo kwesomqondisi wekhilikithi - Bayede News
Ukuvulwa kwezikole kube impumelelo
UMalema usola uRamaphosa ngokusasazela abantu ngamagumgedlela
Emveni kokungabi nohambo oluhle kweProteas e-India ngenyanga eyedlule lapho ihlulwe khona ochungechungeni lwemidlalo sekuphoqe iCricket South Afrika (CSA) ukuthi iqoke umqondisi wekhilikithi ngokushesha.
Lokhu kungenzi kahle kweqembu kuholele ekutheni kukhonjwe indlela uCorrie Van Zyl obebambe esokuba ngumqondisi wekhilikithi yaseNingizimu Afrika. Okunye okumbangele amazinyo abushelelezi ukungakhokhelwa kwabadlali emveni kokusetshenziswa kwezithombe zabo ukukhangisa iMzansi Super League nyakenye. Kubikwa ukuthi iCSA ikweleta laba badlali izigidi ezi-R2.5. ICSA ivele ibhekene ngeziqu zamehlo nenhlangano engamele abadlali iSouth African Cricketers Association (SACA) ngenxa yesimemezelo seCSA sokuthi ifuna ukuhlela kabusha ikhilikithi yasekhaya okuyinto iSACA ethi izoshiya abanye abadlali bencela izithupha.
Njengoba esikhathini esingangenyanga iProteas izobuyela ezinkundleni ngokwamukela i-England emidlalweni ye-ICC yobungqungqulu iphinde yamukele i-Australia ne-India emidlalweni yosuku olulodwa izimisele ukulungisa izinkinga ebhekene nazo ngaphambi kwale midlalo ebalulekile.
ICSA isiwakhiphile amagama abathathu abagaqele esokuba ngumqondisi wekhilikithi yakuleli. Okunguyena ohamba phambili noyintandokazi kubalandeli bekhilikithi nasezinkakheni zekhilikithi nguGreame Smith oseke waba ngukaputeni weProteas isikhathi esingaphezu kweminyaka elishumi. Okunye okwenza abe yimfi vilithi amava anawo ekhilithini yamazwe ngamazwe. Wayengukaputeni weProteas ngesikathi iqopha umlando phakathi kowezi-2008 nowezi-2014. IProteas yanqoba uchungechunge lwemidlalo ekuhambeni e-England nase-Australia kulandelana okwakuqala ukwenzeka emlandweni wekhilikithi yaseNingizimu Afrika. Iphinde yadlala ngokulingana ne-India ekuhambeni izikhathi ezimbili.
UHussein Manack osemathubeni okuqokelwa kulesi sikhundla uke waba ngomunye wabaqoka abadlali abazodlalela iProteas kusuka ngowezi-2012 kwaze kwayilo nyaka. Wayeyingxenye yethimba elaqoka iqembu laseNingizimu Afrika elalidlala imidlalo yeNdebe YoMhlaba e-England kuwo lonyaka. Unawo amava esikhundla esiphezulu kukhilikithi njengoba esake waba ngumphathi kuGauteng Cricket. Ngokweziqu zokuqeqesha uMonack uhlobe ngo-CSA Level 3 okuyiziqu eziphezulu zokuqeqesha, une-UK National Cricket Association Coaching kanye neManager’s Programme in Business Administration neSport and Event Management ayithweswa e-University of Witwatersrand.
Okuyindida ukumenyezelwa kukaVan Zyl kwazise uxoshwe iyona iCSA kanti futhi kwakuthiwe kusaqhutshwa uphenyo mayelana nokungakhokhelwa kwabadlali ngokusetshenziswa kwezithombe zabo. Wakhonjwa indlela nesikhulu esiphuzulu kuCSA uNassei Appiah nobeyinhloko yezoxhaso uClive Eksteen. Lokhu menyezelwa kwakhe kushiya imibuzo ngophenyo ngoba sekusho ukuthi utholakale engenacala.
UVan Zyl ngokwamava usemkantshubovu kwazise uke waba ngumphathi kuCSA, waphinda waqeqesha iProteas emveni kokusula kukaMickey Arthur ngowezi-2010, uyena owayeqeqesha leli qembu emdlalweni yeNdebe YoMhlaba ngowezi-2011 lapho lahlulwa kumaquaterfi nal wabe eseshenxa esihlalweni kwangena uRussel Domingo. Ngaphambi kwalokhu uke waqeqesha iVKB Knights edlala esigabeni esiphuzulu sekhilikithi yasekhaya.
Ozodla umhlanganiso phakathi kwalaba bobathathu uhlalelwe umsebenzi onzima njengoba kuzofanele aqoke umqondisi weProteas njengoba ngoZibandlela izobe inemidlalo ebalulekile. Kuzofanele aqhamuke namaqhinga okufanele asetshenziswe amaqembu esizwe aseNingizimu Afrika aphinde aqhamuke nezinhlelo izizosiza iProteas ikwazi ukulungiselela iNdebe YoMhlaba yangowezi-2023.
Okunye okubhekene nomqondisi ozoqokwa ukuqeda ukuqagula ngokuzokwenzeka ngekhilikithi yasekhaya ukuba izohlelwa kabusha kudlalwe ngezifundazwe noma izoqhubeka ibe ilokhu eyikho manje. Uzophinde abhekele ikhilikithi yabadlali abasebancane ikakhulu abaneminyaka engaphansi kweli-19 kwazise ngowezi-2020 lizobe lidlala imidlalo yeNdebe YoMhlaba ezobe isingethwe iNingizimu Afrika.
ICSA izomemezela odle umhlanganiso emasontweni amabili ezayo. Le nhlangano isemkhankasweni wokuthola oyinhloko yethimba labaqoka iqembu iProteas. Lesi sikhundla besingaphasi kweso likaLinda Zondi owakhonjwa indlela emveni kweNdebe YoMhlaba.
nguQhelani Msweli Nov 14, 2019
Izibazi zezibhelu: Kukhalwa nxazonke njengoba nomphakathi wamaNdiya ukhomba izibazi